Indlu esecaleni komda wePaki yeSizwe yaseSlowinski, emi kwibala elinegadi enkulu kakhulu kunye neshedi endala enethafa elijonge kwiLake Gardno. Indawo entle yohambo lokuya elwandle, uhambo olude, ukukhwela ibhayisekile, kunye nokuphumla egadini kwi-hammock.
Kwindlu, kumgangatho wokuqala, kukho amagumbi okulala ama-3 angalala ukuya kuthi ga kwi-7 abantu, kunye negumbi lokuhlambela elinebhafu kunye neshawari. Umgangatho osezantsi uhlala ekhitshini, indlu yangasese kunye nendawo yokutyela kunye negumbi lokuphumla. Isakhiwo sivalwe yindlu endala, kwaye ejikeleze indlu kukho igadi encinci kunye nethafa elinetafile enkulu yokutya kunye neendawo ezimbini zokupaka. Inxalenye yesibini yeploti yigadi enkulu kakhulu kunye nedesika yokujonga ejonge echibini. Egadini, kukho indawo yomlilo, i-trampoline kunye ne-hammocks.
Indlu itholakala kwidolophana yaseGardna Mala, emaphethelweni eSlowinski National Park, indawo yaseNatura 2000, apho indalo inemithetho yayo. Indawo efanelekileyo yokuhambahamba echibini, uhambo oluya kwiindunduma ezihambayo, iilwandle zasendle okanye ukuhamba ngephenyane kuMlambo iLupawa. Kufuphi na kukho iSurf Camp Retowo (uhambo lokuhamba ngephenyane kunye nekhayithi kunye nokusefa emoyeni) kunye neFama yoDongwe eCzysta (izifundo zokwenza udongwe), kunye nendlu yesibane eCzolpino, induli yaseRowokol kunye nemyuziyam yaseKluki evulelekileyo. Imizuzu engama-20 ngemoto ukuya e-Ustka, eRowow naseSlupska. Charlotte Valley imizuzu engama-30. Iiyure ezi-2 ukuya eTricity kunye nesikhululo seenqwelomoya eGdansk. Ivenkile yegrosari ekufutshane - 100 yeemitha ukusuka kwindlu.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$245